Indlu yelizwe kwiNtlambo yaseArlanza
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJulen
Indlu yeRustic ebekwe kwikegi yakudala yasemkhosini yasePalenzuela. Le ndlu yindlu yabalindi endala eyalungiswayo ukuze ihlale abantu aba-4.
Ukungena endlwini kusetyenziswa indlela yegrabile ecinezelweyo yeemitha ezili-150 (enokugqithwa ngokugqibeleleyo nasiphi na isithuthi), de ufikelele kwindlela ye-asphalt ngaphakathi kwendawo ekhokelela ekungeneni kuyo.
Indlu inegumbi elinye lokulala, negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Eli gumbi lokulala linebhedi eyi-1.50 m kunye nebhedi eyibhanti enebhedi ezimbini eziyi-0.90 m. Kwelinye icala, igumbi lokuhlala linesofa ekhululekile phambi komlilo. Kwi-terrace ngaphandle kwendlu, kukho i-barbecue yokusetyenziswa kweendwendwe.
4.78 · Izimvo eziyi-49
Le fama yayikhe yagcina imagazini endala yomgubo womkhosi. Ngale ndlela, iindwendwe ziya kukwazi ukubona amaziko ashiywe ngumkhosi ngexesha lasemini, njengefektri yeziqhushumbisi, indawo yokupakisha okanye iitonela zokugcina.
Umbuki zindwendwe ngu- Julen
Ifama inabasebenzi bakanogada oza kufumana iindwendwe kwaye unokujongana nayo nayiphi na imeko engxamisekileyo ukuba kuyimfuneko.